မီဒီယာကိုသင့်ဆိုဒ်သို့အလွယ်တကူ Wimpy Player ဖြင့် | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 5, 2007 တနင်္ဂနွေ, သြဂုတ်လ 5, 2007 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ကကျွန်ုပ်၏သားကထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် Flash MP3 player ကောင်းတစ်ခုကိုရှာနေသည် အလွယ်တကူသူ့ဘလော့ဂ်မှဂီတ။ Flash Player သည်အသုံးပြုသူများကိုချက်ချင်းဒေါင်းလုပ်ချခြင်းထက်ဂီတကိုလွှင့်နိုင်သည်။ ငါရှာဖွေပြီးရှာဖွေပြီးနောက်ငါနောက်ဆုံးတော့ဖြတ်ပြီးဖြစ်ပျက် Wimpy ကစားသမား.
ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာ NPR အတွက်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်တွေကိုသုံးတဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခု သင်၏လျော်ကြေးငွေတိုးတက်အောင်အွန်လိုင်းတွင်တင်ခဲ့သည်။ အစက်အပြောက်ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ အဲဒါကိုငါတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာတင်ချင်တယ်၊ Payraise Calculator ကို.
Wimpy မှာကစားသမားအမြောက်အများ၊ ရိုးရိုးခလုတ်တစ်ခု၊ အသံဖွင့်စက်နှင့်ဗီဒီယိုဖွင့်စက်များရှိသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သုံးခုစလုံး၏အကောင်းဆုံးအသွင်ပြင်လက္ခဏာသူတို့တတ်နိုင်ခြင်းနှင့်အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ကြသည်။ ငါ ငါ့သား၏ site ပေါ်တွင်ကစားသမားဒီဇိုင်း မိနစ် ၂၀ ခန့်တွင်ဖြစ်သည်။
ငါဒီဇိုင်းaဂျုံးစ်ဆိုဒါအတွက်ကစားသမား သူတို့ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသူတို့ website တွင် featured သော။ မနေ့ကငါအဘို့အရိုးရှင်းတဲ့ခလုတ်ကိုကစားသမားဒီဇိုင်း Payraise Calculator ကို ဆယ်မိနစ်ခန့်တွင်
အသံဟာကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေအတွက်စိတ်ကူးကောင်းတဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်အလွန်အကျွံအသုံးပြုရမည်သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်စတင်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်မယုံပါ (ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းအသံမှအံ့အားသင့်ခြင်းကိုမုန်းတီးပါသည်။ ) သို့သော်၎င်းဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အမှန်အတိုင်းထည့်သွင်းနိုင်သည် - ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုကဲ့သို့ပင်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ သတင်းအချက်အလက် (သို့) ဝက်ဘ်ကိရိယာအတွက်အသံကလစ်တစ်ခုသည်ထို site အတွက်အခွင့်အာဏာအချို့ပေးနိုင်ပါသည်။